Tag: realtime | Martech Zone
Ithegi: ixesha elililo
Izixazululo zeXesha leNene Ukuphucula ukuBandakanyeka kwi-imeyile yakho
NgoLwesihlanu, Matshi 6, 2015 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngaba abathengi bafumana oko bakufunayo kunxibelelwano lwe-imeyile? Ngaba abathengisi baphoswa ngamathuba okwenza amaphulo e-imeyile afanelekileyo, anentsingiselo kunye nokuzibandakanya? Ngaba iifowuni eziphathwayo kukumanga kokufa kubathengisi be-imeyile? Ngokophando lwakutsha nje oluxhaswe nguLiveclicker kwaye luqhutywa liQela lokuSebenza, abathengi bavakalisa ukungoneliseki kwabo ngee-imeyile ezinxulumene nokuthengisa ezinikezelwe kwizixhobo eziphathwayo. Uphononongo olungaphezulu kwe-1,000 XNUMX ityhila ukuba abathengisi banokuphulukana nokubandakanya ngokupheleleyo abathengi abasebenzisa iselfowuni
Bukela abaTyeleli baKhangele, Jonga, Thenga ngexesha lokwenyani!
NgoMvulo, Agasti 27, 2012 NgeCawa, Agasti 26, 2012 Douglas Karr
I-Analytics ayisoloko ikunika izibalo ezinzulu kunye nemigca yokuziphatha oyifunayo ukuphucula amava okuthenga kwi-Intanethi. I-Lexity ine-app enye, iLexity Live, ekuvumela ukuba ujonge abathengi ukuba bakhangele, jonga kwaye uthenge ngexesha lokwenyani. ILexity Live sisoftware yasimahla exhasa phantse lonke iqonga le-ecommerce kwintengiso. Nalu ulwahlulo lweLexity Live kwindawo yabo (qiniseka ukubona iDemo ebukhoma): Jonga esweni umthengi wakho